Nampikorontana ny sain’ny maro, indrindra ny teo anivon`ny Banky Foibe izany ary nanaovany fanambarana. Araka ny sata mifehy ny Banky Foiben’i Madagasikara, voafaritry ny lalàna, dia izy irery ihany no manana fahafahana hamoaka, hamorona ary hanaparitaka ny vola eto Madagasikara. Amin’izao fotoana izao dia nametraka fitoriana ny eo anivon’ny Banky Foiben’I Madagasikara na dia tsy mbola misy vaovao marim-pototra aloha hatreto ny amin’ny fahitana mivantana ireo vola naseho anaty tambajotran-tserasera ireo. Nosokajian’izy ireo ho fanohintohinana ny filaminam-bahoaka ny zava-nitranga. Nanamafy ihany koa ny teo anivon’ny Banky foibe, tamin’ny alalan’ny governora lefitra voalohany, Rakotondramanga Jules Théodore fa tsy mbola manana vinavina hamoaka vola vaovao izany mihitsy aloha hatreto. Andrasana, araka izany, ny ho tohin’ny raharaha.